China ST Series C Yakagadzika Imwe Crank Mechanical Press fekitori uye vanotengesa | Daya
Kuomarara kwemuviri (deformation) 1/6000.
Hydraulic zadzisa dziviriro mudziyo
Chinyorwa chinotsvedza kugadzirisa mudziyo (pazasi ST60)
Magetsi inotsvedza kugadzirisa mudziyo (pamusoro ST80)
Variable frequency frequency kumhanyisa mota (inogadziriswa kumhanya)
Mechanical muforoma kukwirira chiratidzo (pazasi ST60)
Dhijitari muforoma kukwirira chiratidzo (pamusoro ST80)
Slider uye chakuvhuvhu pachiyero mudziyo
Inotenderera cam controller
Crankshaft angle chiratidzo
Mhepo sosi yekubatanidza
Dhiviri-degree kudonha chengetedzo chishandiso
Zvokuimba tsoka shockproof
Yakachengeterwa interface yeasina kunaka dhirivhari yekutsvaga kifaa
Main mota inodzosera mudziyo
Photoelectric chengetedzo chengetedzo mudziyo
Electric girisi lubrication mudziyo
Bata skrini (pre-break, pre-mutoro)
Pneumatic muforoma ikanyanya kifaa
Kurumidza kufa shanduko mudziyo (kufa anosimudza, kufa kusungisa
Kana chakuchinja chinja)
Yekumusoro chikamu punching chishandiso chekutsvedza
Feeder (mhepo, mechina uye NC)
Mould ufe chiedza chemwenje
Yakatetepa mafuta girisi mudziyo
DAYA yakatwasuka divi kaviri crank punch yekudhinda
Imwe yakatwasuka divi yakapetwa kaviri crank michina
Dhaya muchina: nepuratifomu uye chengetedzo fenzi, iri nyore yekunamatira batira uye shanduko yekutonhora mafuta, main mota bhandi rakasununguka uye nyore kugadzirisa, uye zviri nyore kune zvinotevera kugadzirisa. Yakachengeteka uye iri nyore.
Mumwe mupepeti:Pasina chikuva chikuva. Clutch kugadzirisa, kutsiva kwemafuta anotonhorera, kusununguka kweiyo main motor bhandi, nezvimwewo izvo zvinogona kungopedzwa nerubatsiro rwe forklift, iyo isiri nyore kune inotevera yekugadzirisa uye kugadzirisa. Kune dzimwe njodzi dzekuchengetedza.
Dhaya muchina: Dhaya yekudhinda inotora makona mana nemativi masere kutenderedza njanji yekutungamira. Munzvimbo yekumonera, iyo yekutsvedza gwara njanji inosanganisirwa neyese rairo njanji pane tafura yemuviri. Rudzi urwu rwegwara rezvitima rine hunhu hweakakwira tsika yekukanda, yakasimba anti eccentric mutoro kugona, diki njanji kupfeka uye yakareba chaiyo yekuchengetedza nguva.
Mumwe mupepeti:njanji inotungamira ine semi yakakomberedzwa chimiro sezvakaratidzwa mumufananidzo chaiye inogamuchirwa. Munguva yekudhinda, pane chikamu chechitima chinotungamira chakafumurwa. Munguva yekutsika tsika, iyo yekutsvedza gwara njanji iri nyore kutetepa, ine varombo anti bias mutoro kugona, hombe njanji kusakara, ipfupi nemazvo kuchengetedza nguva uye yakakwira yekugadzirisa mutengo.
Dhaya muchina: chinhambwe pakati pemapoinzi maviri ekumanikidza kwesimba chinopfuura makumi matanhatu muzana; Mabhenefiti: iro rakakura chinhambwe pakati pemaporesi maviri ekushandisa simba, rakakura iro simba rekusimbisa; iyo yakakura daro pakati pemaporesi maviri ekushandisa simba, iyo inodhura dhizaini.
Mumwe mupepeti:nhambwe iri pakati pemapoinzi maviri kazhinji iri pasi pe50%; Kukanganisa: diki daro pakati pemapoinzi ekushandisa simba, iwo madiki eccentric anotakura masimba. Iyo njanji yegwara iri nyore kutsvedza, nzira yegwara iri nyore kupfeka, uye iko kweyechokwadi kweyechitima njanji yakashata.
Dhaya muchina: kumanikidzwa mutete mafuta kutenderera system, simba rekuchengetedza, rinogona kudzokororwa, fan yekupisa yekuita yakanaka, kana ichienzaniswa negirisi lubrication inogona kuwedzerwa ne5-10 kurova paminiti.
Mumwe mupepeti: yemagetsi girisi pombi, girizi haigone kushandiswa zvekare, hapana mukana wekumanikidzwa mutete mafuta kutenderera system.
Dhaya muchina: kana urefu hwekurohwa hwakafanana, iyo yakamanikidzwa yakatetepa oiri kutenderera system ine hunyanzvi hwepamusoro, ichienzaniswa negirisi, inogona kuwedzera 5-10 kurova paminiti. Nyatsoteedzera yeJapan JIS level 1 standard; iyo yeJapan JIS level 1 standard yakakwira kupfuura iyo Taiwan CNS level 1 standard.
Mumwe mupepeti:yemagetsi girisi pombi, girizi haigone kushandiswa zvekare, hapana kumanikidzwa mafuta kutenderera system zvakanakira. zvinoenderana neTaiwan CNS level 1 standard
Slide gwara reDaya punch yekudhinda
mamwe ma slide mazano e punch
Tungamira njanji yeDaya punch yekudhinda
1.High frequency quenching maitiro: kuomarara pamusoro hrc48;
2. Kukuya maitiro echitima njanji: iyo yekumusoro kupera inogona kusvika ra0.4-ra0.8 (girazi pamusoro), kugadzikana, kuenzana uye kutwasuka mukati me 0.005mm / ㎡.
3.Iye chishandiso chishandiso chine zvakanakira kudiki kupfeka, kukwirira kwakaringana, kureba kwakaringana nguva yekuchengetedza, hupenyu hurefu hwebasa uye yakaderera simba rekushandisa.
Imwe yekudhinda gadhi njanjihapana kudzima maitiro; azvikuya kugadzira, pamusoro roughness ra1.6-ra3.2, flatness, parallelism, perpendicularity kupfuura 0.3mm / ㎡
Daya wokudhinda crankshaft
mamwe matsimba ekudhinda
Daya chibhakera muchina: iro crankshaft rakagadzirwa neakakwira simba chiwanikwa 42CrMo Makomborero: iyo simba iri 1,3 zvakapetwa kupfuura iyo ye45 simbi, hupenyu hwebasa hwakareba, kupfeka kuramba kwakanaka, kupfeka kudiki, uye iko iko iko kwakachengetedzwa kwenguva refu.
Mimwe michina yekudhinda: yakagadzirwa nesimbi makumi mana neshanu, Zvakaipa: mutengo wakaderera, simba uye kupfeka kuramba hazvienzaniswe ne42CrMo
Oiri nzira yeDAYA punch PRESS: Φ 8 inoshandiswa kumafuta ekumanikidza kuridza pombi.
Zvakanakira: Pombi refu, dhayamita hombe haisi nyore kuvhara, kutyora, kuve nechokwadi chekuzora mafuta, kutsetseka.
Mimwe michina yekudhinda: iyo yekumanikidza yekumanikidza lubrication pombi yemuchina inotora Φ 6.
Pashure: Shandura Joint Yekumhanyisa Press Press (Yekutsanya akateedzana)
Zvadaro: STX akateedzana C Dhizaina Imwe Crank Mechanical Press
STC Series C mhando "Vhura Double Pointi Cran ...